Mpandeha 9 amin'ny 10 no mahazo aina rehefa mampiasa pasipaoro fahasalamana nomerika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mpandeha 9 amin'ny 10 no mahazo aina rehefa mampiasa pasipaoro fahasalamana nomerika
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • etn • Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • fanorenana • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Tourism • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Travel • Travel Technology News • Travel Wire News
Ny fandinihana dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny ahiahin'ireo mpandeha momba ny fiainana manokana, ny fampiasana sy ny filaminana
41% ny mpandeha dia maniry ny hamandrika ny dia iraisam-pirenena ao anatin'ny enina herinandro aorian'ny famoahana ny fameperana
Ny pasipaoro fahasalamana nomerika dia mety ho fitaovana lehibe amin'ny fanokafana ny dia
Ny 74% amin'ireo mpandeha nohadihadiana dia vonona ny hitahiry ny angon-drakitra momba ny fahasalamany
Ny fandalinana vaovao dia nanome vaovao mampahery ho an'ny indostria, miaraka amin'ny 41% ny mpandeha dia maniry ny hamandrika ny dia iraisam-pirenena ao anatin'ny enina herinandro aorian'ny famitana ny fameperana.
Ny fandinihana dia naneho ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny ahiahin'ireo mpandeha momba ny fiainana manokana, ny fampiasana sy ny filaminana.
Rehefa mizaha ny tombotsoan'ny pasipaoro ara-pahasalamana nomerika ny governemanta sy ny indostrian'ny fizahan-tany dia mazava ny hafatra avy amin'ny mpandeha: ny pasipaoro fahasalamana nomerika dia mety ho fitaovana lehibe amin'ny fanokafana ny dia. Hitan'ny fandinihana fa maherin'ny 9 amin'ny 10 (91%) ireo mpandeha nohadihadiana nilaza fa hahazo aina izy ireo amin'ny fampiasana pasipaoro fahasalamana nomerika amin'ny dia manaraka.
Ity fikarohana mamporisika ity dia manome tosika ny hanafaingana ny drafitra ho an'ny pasipaoro ara-pahasalamana nomerika izay hanampy amin'ny famahana ny olan'ny mpandeha. Ny fandinihana dia nanolotra vaovao tsara ho an'ny indostria satria olona mihoatra ny 2 amin'ny mpitsangatsangana 5 (41%) no nilaza fa hamandrika ny dia iraisam-pirenena ao anatin'ny enim-bolana amin'ny famerana ny fameperana, mampiseho fa ny fahazotoana mitety dia lavitra.
Ny fanadihadiana ireo mpitsangatsangana 9,055 any France, Spain, Germany, India, UAE, Russia, Singapore, UK ary Etazonia koa dia nahitana fampandrenesana ho an'ny indostria miaraka amin'ireo mpitsangatsangana 9 amin'ny 10 (93%) izay manana ahiahy momba ny data momba ny fahasalamany. fa hotehirizina ny dia.
Rehefa nanontaniana momba ny fandraisan'ny olona fitehirizana sy fizarana angona fahasalamana dizitaly dia aseho ny valin'ny fanadihadiana:
· Eo ambanin'ny telo ampahefatra (74%) amin'ireo mpandeha nohadihadiana no vonona hitahiry ny angon-drakitra momba ny fahasalamam-pitetezam-paritany raha mamela azy ireo hamaky ny seranam-piaramanidina haingana kokoa miaraka amin'ny fifandraisana vitsivitsy mifanatrika.
· Maherin'ny 7 amin'ny 10 (72%) ny mpandeha nohadihadiana no vonona ny hitahiry ny angon-drakitra momba ny fahasalamana amin'ny dia raha mamela azy ireo handeha amin'ny toerana maro kokoa
· 68% amin'ireo mpandeha dia nanaiky fa mety hizara ny angon-drakitra momba ny fahasalamany izy ireo raha toa ka manolotra fomba hitahirizana ny angon-drakitra momba ny fahasalamam-bahoaka ireo zotram-piaramanidina matetika irahin'izy ireo.
Na dia avo aza ny fahazoana mizara angon-drakitra, ny indostrian'ny fizahan-tany dia mila mandinika ny olan'ny mpandeha manodidina ny fampiasana angona. Ny olana lehibe telo ananan'ireo mpandeha dia:
· Loza mety hitranga amin'ny filaminana amin'ny fanapahana ny mombamomba anao (38%)
· Ny olana manokana momba ny fiainana manokana momba izay tokony zaraina ny mombamomba ny fahasalamana (35%)
· Ny tsy fahampian'ny mangarahara sy ny fifehezana ny toerana zaraina ny angona (30%).
Ny fanadihadiana dia nanadihady ihany koa ny vahaolana mety hanamaivanana ny ahiahy momba ny angona nomerika momba ny fahasalamana sy ny dia amin'ny ho avy ary hita ny valiny:
· 42% ny mpandeha dia nilaza fa ny fampiharana fampiharana izay azo ampiasaina mandritra ny dia manontolo dia hanatsara ny traikefa fitetezam-paritany ankapobeny ary hanome toky azy ireo fa ny mombamomba azy ireo dia amin'ny toerana iray ihany
· 41% -n'ny mpandeha dia manaiky fa hampihena ny adin-tsainy amin'ny dia lavitra ny fampiharana fitsangatsanganana
· Ny 62% amin'ireo mpandeha dia mety hampiasa fampiharana kokoa hitahirizana ny angon-drakitra momba ny fahasalamany raha misy orinasan-dia miaraka amin'ny orinasan-tserasera fitokisana.
Ny fikarohana dia faharoa amin'ny andiam-panadihadiana mpandehandeha, izay nandinihan'i Amadeus maso tsy tapaka momba ny fihetseham-pon'ny mpandeha sy ny ahiahiny hanampiana ny indostria hanangana ny dia amin'ny fomba mahomby indrindra. Ny fanadihadiana tamin'ny taona 2020 Rethink Travel dia nanambara ny fomba ahafahan'ny teknolojia manampy amin'ny fampitomboana ny fahatokisan'ny mpandeha ary namerina ny fanontanian'i Amadeus ity fanontaniana ity mba hahitana ny fiovan'ny fahatokisan'ny mpandeha nanomboka ny volana septambra 2020. 91% amin'ireo mpandeha no milaza ankehitriny fa hampitombo ny fahatokisan-tenany amin'ny fivezivezena ny teknolojia, fitomboan'ny 84% tamin'ny septambra 2020.
Rehefa nanontaniana izay teknolojia hampitombo ny fahatokisan-tena amin'ny fivezivezena ao anatin'ny 12 volana manaraka, ny vahaolana amin'ny finday dia nasongadina ho safidy malaza, miaraka amin'ireo haitao telo voalohany ao anatin'izany:
· Fampiharana finday manome fampandrenesana sy fanairana mandritra ny dia (45%)
· Fandoavana finday tsy misy fifandraisana (oh: Apple na Google Pay, Paypal, Venmo) (44%)
· Fandraisana an-tariby (oh: ny fampiasa amin'ny findainao) (43%)
Tsy misy isalasalana fa ny COVID-19 dia hanohy hamolavola ny fomba fitetezantsika mandritra ny volana ho avy, toy ny fiantraikany amin'ny faritra maro hafa amin'ny fiainantsika. Na dia mbola misy aza ny fisalasalana, ny fikarohana toy izao dia manamafy ny fahatsapako fanantenana fa hanangana fitsangatsanganana tsara kokoa noho ny teo aloha isika. Ny fiaraha-miasa manerana ny governemanta sy ny indostria misy antsika no lakilen'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia, satria manolotra ny antenain'ny mpandeha voalaza ato amin'ity fanadihadiana momba ny fahasalamana nomerika Rebuild Travel ity izahay, mampiasa ny haitao mety hahafahana manao dia lavitra mifamatotra sy tsy mifandray.
Ity fandinihana ity dia manasongadina indray ny andraikitra lehibe ilain'ny teknolojia amin'ny fanarenana ny dia. Nahita fiovana isika hatramin'ny fanadihadiana farany natao, satria ny mpandeha dia mametraka fifantohana bebe kokoa amin'ny teknolojia finday sy tsy misy mikasika, faritra manandanja izay manamafy mazava tsara ny fahatokisan'ny mpandeha. Tena ilaina ihany koa ny mahita fa misokatra amin'ny pasipaoro ara-pahasalamana nomerika ny mpizaha tany ary mizara ny angon-drakitra arakaraka ny fivezivezena mandritra ny dia, raha vantany vao tafapetraka ny fiarovana marina. Ao amin'ny Amadeus, manolo-tena hanangana indostria tsara kokoa izahay, miaraka amin'ireo mpanjifantsika sy mpiara-miasa aminay.
Inona no vaovao any amin'ny nosy The Bahamas amin'ny volana aprily
HotelApp - App an'ny mpitsidika tsy misy Touch vaovao avy amin'ny International Travel Awards